Information on Radiotherapy treatment in Nepali language.
रेडियोथेरापी : Frequently asked questions
रेडियोथेरापी क्यान्सर निको गर्न मात्र प्रयोग हुन्छ त ? सधैं होइन । केही क्यान्सर निको नहुने अवस्थामा पुगिसकेका हुन्छन् । त्यस्ता बिरामीलाई पनि रेडियोथेरापीले राम्रो गर्छ । क्यान्सरसँग आएका समस्या, जस्तै: हड्डीको दुखाइ, नसा च्यापिएको वा अन्य समस्यामा रेडियोथेरापीले सहयोग गर्छ । यसलाई Palliative Radiotherapy भनिन्छ
रेडियोथेरापीका विभिन्न प्रकारमध्ये यहाँ शरीरको बाहिरबाट दिइने रेडियोथेरापी (External beam radiotherapy) बारे चर्चा गरिँदैछ । Linear Accelerator (LINAC/लिन्याक) एउटा अत्याधुनिक मेसिन हो, जसको प्रयोग रेडियोथेरापीमा गरिन्छ । यो मेसिनबाट शक्तिशाली एक्स-रे विकिरण निस्किन्छ । यो मेसिन ठूलो हुन्छ र महँगो पनि । त्यसैले धेरै अस्पतालमा यो सेवा छैन ।
रेडियोथेरापीको विकिरणले ट्युमरका कोषलाई क्षति गर्छ । यसो गर्दा केही निरोगी कोषमा पनि चोट पर्छ । यसका कारण प्रतिकूल असर देखिन सक्छन् । तर, निरोगी कोष छिटै निको हुन्छन्, जुन गुण ट्युमरका कोषमा पाइँदैन । असर पनि कसैलाई धेरै, कसैलाई थोरै देखिन सक्छन् । धेरैलाई देखिने प्रतिकूल असर भनेको थकान हो । सामान्य मान्छेभन्दा बढी थकाइ लाग्ने, जाँगर नभएको जस्तो हुन सक्छ । त्यसबाहेक रेडियोथेरापी गरिएको ठाउँमा छालाका असर हुन्छन् । रातो हुने, सुन्निएको झैं हुने, दुख्ने हुन सक्छ, जसको उपचार छ र निको पनि हुन्छ । पेटमा रेडियोथेरापी पाएकाहरूलाई उल्टी वा पखाला लाग्न सक्छ । यो पनि सहजै उपचार हुन्छ ।
रेडियोथेरापीले आफैं पनि क्यान्सर गराउन सक्छ ? रेडियोथेरापीले क्यान्सर गराउने सम्भावना न्यून छ । एक अध्ययनअनुसार रेडियोथेरापी पाएका हजार बिरामीमध्ये १५ वर्षपछि क्यान्सर हुन सक्ने सम्भावना ५ जनालाई हुन्छ ! यो भनेको निकै कम हो । रेडियोथेरापीका कारण शरीरमा हुने प्रतिकूल असर न्यून छन्, भएका पनि समाधान गर्न सकिने खालका छन् ।
CancerTreatment In Nepal
किमोथेरापी र रेडियोथेरापी गराउने बिरामीको लागी पौष्टिक खानेकुराको जानकारी